Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Guam » Talaalka iyo Talaalka Guam ee dalxiisayaasha reer Taiwan
Airport • Aviation • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • Wararka Guam • Caafimaadka Warka • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Ammaanka • Wararka Jebinta ee Taiwan • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka
Waxaa Taiwan ka jira liisas sugitaan oo dheer oo ay dadku ka helayaan tallaalka COVID-19. Fasax aadida dhulka Mareykanka ee Guam waxaa ku jiri doona tallaalka, xeebo kuleyl qurux badan, iyo dhadhan gaar ah oo ah ruuxa Håfa Adai.
loo yaqaan "Air V & V" loogu talagalay “fasax iyo bannaanaansho,” waxaa ku jira qiyaasta koowaad ee tallaalka xulashada, iyadoo ay suuragal tahay in tallaal labaad la qaado haddii dalxiisayaashu ay ku sii nagaadaan dhulka Mareykanka muddo dheer.
Xiisaha safarada ayaa sii kordhay ka dib markii dowladda Guam ay baabi'isay shuruudihii karantiil ee loogu talagalay dadka soo booqanaya ee awooda inay muujiyaan baaritaanka PCR-ga ee xun 72 saacadood ka hor duulimaadka
Axdiga EVA Air, waa Airbus A321-200, waa mid ka mid ah duulimaadyo dhowr ah oo ay isku dubbaridaan wakaaladaha socdaalka ee kala duwan ee Taiwan, sida Lion Travel iyo Phoenix Tours In kabadan 2,000 oo booqdayaal ah oo ka socda Taiwan ayaa la filayaa bilaha Luulyo iyo Ogosto.
Visitors Bureau The Guam (isctimaalin) iyo Maamulka Garoonka AB Won Pat International dhaweeyay duulimaad toos ah Guam ee ka Taiwan in ka badan hal sano iyo badh. Duulimaadka loo yaqaan 'EVA Air charter flight' wuxuu u qaaday 153 rakaab ah jasiiradda si uu uga qaybqaato barnaamijka dalxiiska tallaalka ee Guam - Air V&V.
In ka badan 2,000 oo soo booqdayaal ah ayaa ugu dambayn ka soo safri doona Taiwan una socdaalaya Guam si ay u helaan talaal isla markaana ugu raaxaystaan ​​fasax riyo ah isla wakhtigaas.
Dalxiisayaashii reer Taiwan ee ku laabtay Guam
"Tani waa bilowgii soo nooleynta warshaddii koowaad ee Guam," ayuu yiri Madaxweynaha & Madaxa shirkadda GVB Carl TC Gutierrez. Waxaan jeclaan lahaa inaan u mahadceliyo Badhasaabka Lou Leon Guerrero oo taageeraya barnaamijka Air V&V, kaas oo dadka martida ah fursad u siinaya inay is tallaalaan sidoo kalena ay la kulmaan niyaddeenna Håfa Adai. ”
Isctimaalin siiyaa biyo iyo gacmo dhalada amaan u tahay rakaabka sida ku sameeyeen hab ka socdaalka Waaxda Caafimaadka Dadweynaha iyo Isbaaro Adeegyada Bulshada (DPHSS). Rakaabka waxaa sidoo kale si toos ah loogu soo dhaweeyay muusikada Chamoru ee Ruby Santos iyo Jesse Bais.
"Waxaan rabaa inaan aqoonsado iskaashiga weyn ee ka dhexeeya Guam Taiwan Office, EVA Air, iyo la-hawlgalayaasha kale ee ganacsiga safarka ee ku aaddan in duulimaadkan charter-ka uu noqdo mid guuleysta," ayuu yiri Agaasimaha GVB ee Suuq-geynta Global Nadine Leon Guerrero. "Waxaan dooneynaa inaan u mahadcelino Maamulka Garoonka Caalamiga ee Guam, Kastamka Guam iyo Karantiil, Booliska Madaarka, iyo Caafimaadka Dadweynaha iskaashigooda joogtada ah ee soo dhaweynta martida jasiiradeena quruxda badan."